Wacaal Daray ah wararkii ugu danbeeyay Ee DDS |
Wacaal Daray ah wararkii ugu danbeeyay Ee DDS
XDSHSI iyo xukuumada DDS ayaa diyaar garow dhinac kasta leh ugu jirta sidii uu qabsoomilahaa shirwaynaha 10aad ee XDSHSI taasi oo hore loo shaaciyay wakhtiga laqabanayo iyada oo la dhamaystiray gudiyadii kala duwanaa ee suurtagalinalaa qabsoomida shirkaasi.
Ma jirto xaqiiq sheegaysa in dib loo dhigay xiligii loogu talagalay in uu qabsoomo shirwaynaha 10aad ee XDSHSI hase yeeshaa waxaa muuqada in ay ka horeeyaan hawlo balaadhan oo wakhti qaadanaya kuwaasi oo ka horeeya shirwaynaha oo ay wakhti-kooban inagaxigto xiligii loogu talagalay.
Illo wareed lagu kalsoon yahay oo mardhawayd naga soo gaadhay xarunta dhexe ee XDSHSI ayaa noo xaqiijiyay in ay jiraan diyaar garow salbalaadhan oo ka horaynaya shirwaynaha xisbiga kuwaasi oo ah tababaro iyo wacyigalino kula duwan oo laga qabanayo guud ahaanba deegaanka.
Waxaa kale oo ay illo wareedkaasi noo cadeeyeen in tababarka loo qabanayo dhamaan hogaaminta heer deegaan, sida hogaaminta sare, hogaaminta dhexe iyo hogaaminta hoose, tababarkaasi oo wajigiisa koowaad maalinta barito ugu farmaya xarunta deegaanka hogaaminta sare ee deegaanka sida hogaaminta heer deegaan, gobolada iyo maamul magaalooyinka deegaanka kaasi oo socondoona muddo sadex maalmood ah.
Sidoo kale wajigiisa labaad ee tababarkan ayaa waxaa loo qabanayaa hogaaminta dhexe ee degmooyinka deegaanka. Kaasi oo socondoona muddo sadexmaalmood ah.
Ujeedooyinka laga leeyahay tababarkan ayaa waxa loo sheegay in ay tahay sidii hogaamintu fahan buuxa iyo aragti midaysan uga qaadan lahaayeen isbadalka ka socda guud ahaan dalka gaar ahaana deegaanka, faa’iidooyinka uu leeyhaya isbadalku, caqabadaha horyaala iyo jihada mustaqbal si loo suurtagaliyo helitaanka hanaan lagu xoojiyo arimaha XDSHSI lana abuuro hogaamin bisayl siyaasadeed iyo karti fulineed u leh xaqiijinta isbadalka.
Geesta kale waxaa la sheegay in kulamo iyo fagarayaal kala duwan ay xukuumada iyo xisbigu la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin aqoon yahanka iyo qurba joogta deegaanka si qaybaha kala duwan ee bulshadu jihooyin midaysan uga qaadaan isbadalkan islamarkaana qofkasta u ogaado kaalinta uu ku leeyahay taabagalinta isbadalka.